HIV ku dhacay boqollaal ka mid ah caruurta Pakistan - BBC News Somali
HIV ku dhacay boqollaal ka mid ah caruurta Pakistan
Image caption Hal dhaqtar ayaa loo xiray arrintan
Astaamihii ugu horeeyay ee muujinayay in ay wax qaldanaayeen waxaa, Bishii February, lagu arkay magaallo yar oo ku taalla Koonfurta Pakistan oo lagu magacaabo Ratto Dero.
Waalidiin badan oo walaacsan ayaa u tagay dhaqtar waxayna u sheegeen in caruurtooda aysan ka kicin qandhada.
Isbuucyo gudahood, waxaa la arkay caruur kaloo badan oo xannuun kaa mid la mid ah uu ku dhacay.
Xilligaa, Dr Imran Aarbani ayaa dhiig laga qaaday caruurtaas u diray baaritaan dheeraad ah. Natiijadii la soo celiyay ayaa noqotay mid cabsi wayn ku beertay. Caruurta waxay qaadeen caabuqa HIV, mana jiro qof og sida uu xannuunkaas ugu dhacay.
"Markii la soo gaaray, 24-tii April, illaa 15 caruur ah ayaa laga helay cudurka halista ah, inkastoo waalidiintooda oo dhan aysan qabin HIV", ayuu dhaqtarka cisbitaalka u sheegay BBC.
Keliya waxay noqotay xaalad meel halis ah taagan.
Bishii la soo dhaafay, in ka badan 607 qof oo boqolkiiba 75 ay yihiin caruur, ayaa qaaday caabuqa ka dib markii warar been abuur ah oo la xiriira xanuunka la faafiyay. Waalidiinta waxay caruurtooda geeyeen xarun caafimaad oo laga dhex sameeyay cisbitaal ay dowladda leedahay taas oo ay aasaatay waaxda caafimaadka ee gobolka Sindh.
Waxay noqotay arrin la yaableh, si kastaba xaqiiqadu waxay tahay in aysan ahayn markii ugu horeysay ee gobolkaas ay ka dhacdo xaalad tan la mid ah, sannadihii lasoo dhaafay.
Image caption Kumannaan qof oo dalka oo dhan ku nool ayaa baaritaan caafimaad lagu sameeyay
Warar been abuur ah oo ku saabsan inuu dillaacay HIV ee gobolka Sindha oo Ratto Dero ay ka tirsan tahay ayaa sababay in kumannaan qof oo 2016kii la baaray, markale tijaabo caafimaad lagu sameeyo.
Xilligaas, 1,521 qof ayaa laga helay cudurka HIV, sida laga soo xigtay xogta xarunta xakameynta Aids-ka ee Sindha.
Talaalka HIV oo laga billaabay Koonfur Afrika
Inta badan dadka ay saameysay waxay ahaayeen rag waxaana lala xiriiriyay dadka jirkooda ka ganacsada kuwaas oo 32 iyaga ka mid ah laga helay caabuqa HIV.
Hadda, markii xaaladdan cusub la ogaaday waxaa howlgal lagu qabqabanayo dadka gobolkaas laga billaabay Larkana, halkaas oo dadka jirkooda ka ganacsada ay ku sugan yihiin, inkastoo arrintaas ay mamnuuc ka tahay Pakistan.
Haddaba, xaaladdan cusub malagu xiriirin karaan dhaqaatiirta caafimaadka?
Dr Asad Memon, oo ah madaxa xarunta xakameynta HIV ee Larkana ayaa aaminsan sidaas - inkastoo si cad uusan u sheegin.
"Waxay ila tahay in caabuqa (Aids) ay fidiyeen xubno ka tirsan kooxda halista sare leh (Dadka jirkooda ka ganacsada), ayna fuliyeen dhaqtar-beenaadyo usii gudbiyay bukaannada kale", ayuu u sheegay BBC.
"Dhaqtar-beenaadyo" wuxuu ula jeedaa kuwa aan xirfadda lahayn ee haddana dadka dawada siiya, ee leh cisbitaallo ay gaar u leeyihiin ee iska dhiga in ay dhaqaatiir yihiin.
Image caption Cirbado dhowr goor la isticmaalay ayaa laga shakiyay
Dalka Pakistan, gaar ahaan deegaannada miyiga ah, dadka waxay aalaaba u tagaan kuwa dhaqaatiir iska dhigaya halkii ay dawo u raadsan lahaayeen cisbitaallada, sababo la xiriira dhaqaalaha iyo xilliga uu dhaqtarka la hadlayo bukaanka.
Dr Fatima Mir, waxay ka shaqeysaa cisbitaalka Aga Khan, waxayna ku taqasustay daweynta caruurta qaba cudurka Aids-ka. Hadda waxay u shaqeyneysaa si iskeed ah. Waxay sheegeysaa in feejignaan la'aan ay sabab u tahay xaaladdan.
"Seddax qaab ayuu canuga ku qaadi karaa caabuqa," ayay tiri. "In uu caloosha hooyada ka qaado inta uu uurka ku jiro, in dhiig lagu shubo ama in qalab HIV leh, sida cirbado, lagu daweeyo."
Saraakiisha dowladda waxay u muuqdaan in ay ku raacsan yihiin. Qiyaastii 500 oo ah xarumo caafimaad oo aan sharci ahayn ayaa gobolkaas ku yaalla, sida ay madaxda caafimaadka ku warrameen.
Image caption Dr Muzaffar Ghangro ayaa laga shakisan yahay
Waxaa la xira dhaqtar caafimaad oo ku taqasusay caruurta, Dr Muzaffar Ghangro. Waxaa lagu eedeeyay faafinta xannuunka isagoo adeegsanaya cirbado.
Wuu beeniyay eedaha, wuxuuna sheegay in dhammaan dadka uu cudurka ku dhacay in aysan ahayn bukaannadii uu daweeyay.
Al-Shabaab oo adoonsata dumar si ay ugu galmoodaan
25 Maajo 2017
Dhaqaatiirta UK oo qof ka daweeyay HIV